कहाँ के गर्दैछन गायक गंगा बरदान ? - Purbeli News
कहाँ के गर्दैछन गायक गंगा बरदान ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०६, २०७३ समय: ७:३०:०९
नरेन्द्र बस्नेत ।
माेरङ / झट्ट उनलाई देख्ने र भेटने जो कोहीले पनि उनलाई साधु सन्त नै हुन भन्ने ठान्छन । लामो जट्टाधारी कपाल,उस्तै दाह्री जुंगा अनि गेटअप जो सुकै पनि उनको अगाडी पुगेपछि एकपटक सोच्न बाध्य हुन्छ उनी साधु सन्त हुन वा अरु नै कोही । उमेरले ६ दशक पार गर्दा पनि उनको जोश जाँगर र अनुहारमा चमक अझै तन्नेरी नै लाग्छ ।
उनलाई धेरैले गेटअपका कारण नेपाली बब मार्लीका रुपमा समेत चिन्छन। तर उनी यो कुरा मान्न तयार छैनन । उनलाई आफनो गेटअप अरुको जस्तो नहोस र आफनै पाराको होस भन्ने लागेको छ । उनी दाबी गर्छन लाग्छ मेरोजस्तो गेटअप दुनियाँमा कसैको छैन । किनकी म अन्तराष्ट्रिय स्तरको गायक हुँ । बरु अरुले चाँहि मेरो गेटअप चोरेका हुन ।
पुर्वी मोरङको बेलबारी लगायत आसपासका हाट बजारतिर सधै लखरलखर हिँडेको भेटिने उनी लामो समयदेखि त्यता बस्न छोडेका रहेछन । उनलाई पछयाउँदे सुनसरीको धरानस्थित बिजपयुर डाँडामा पुग्दा उनी औधी खुसी भए । घरदेखि अलि तलसम्म लिन आए । अनि धाप मार्दै भने भाई सर साह्ै खुसी लाग्यो अझै मलाई बिर्षनुभएको रहेन छ । थुप्रै बादशाह भन्ने सँग संगत गरियो,धेरैको ज्यान बचाईयो,धेरैलाई कमाईखाने भाँडो दिईयो तर् सबैले बिर्सिए उनी भावुक बने ।
केही बर्ष अघि बेलबारीमा स्थापना भएको एउटा रेडियोमा पहिलोपटक उनको अन्तरबार्ता र उनले बेलबारीका लागी गरेको योगदानका बारेमा चर्चा सहित केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा उनको बारेमा सामान्य परिचय प्रकाशित गरेको थिँए । उनले भेटने बित्तिकै गुनासो गरे भाई सर,मैले त्यत्रो काम गरेँ,त्यहीँ त्यति धेरै मिडियाहरु खुलेका छन तर अहँ कहिल्यै मलाई सम्झिएनन र मेरा गित समेत बजाएनन । साहै्रै दुःख लागेको छ ।
नेपाली लोक संगितका क्षेत्रमा अलग्गै पह्चिान बनाएका गायक, रचनाकार र संगितकार गंगा बरदान (मास्के) नेपाली गित संगितका क्षेत्रमा कुनै नौलो नाम होईन । बिगत ३८ बर्षदेखि नेपाली गित र संगीतका क्षेत्रमा क्रियाशिल उनी पछिल्लो समय नयाँ गित रेकर्डिङ र कविता संग्रहको प्रकाशनको तयारीमा जुटेका रहेछन ।
भोजपुरको दिङलामा २००९ सालमा जन्मिएका बरदान २०३५ सालदेखि गायन,रचना,र संगितमा क्रियाशिल छन । उनका ४ वटा एल्बम बजारमा आएका छन भने केही गित रेकर्डिङ भईरहेका छन । उनले २०३५ सालमा रेडियो नेपालमा पहिलोपटक कहाँमा काटयो,बेतको लौरी, रेकर्ड गराए । पछि छपनीले छान छान…डबकीले हान जस्ता बहुचर्चित गित रेकर्ड गराएका थिए ।
सुनसरीको धरानस्थित बिजयपुरका बासिन्दा उनले पछिल्लोे समय चर्चित बनेका भारतको दार्जिलिङ निबासी नेपालीभाषी गायक बिपुल क्षेत्रीमाथी आफनो गित चोरी गरेको गम्भिर आरोप समेत लगाएका छन ।
उनले आफनो ३८ बर्ष पुरानो गित कहाँमा काटयो,बेतको लौरी नामको गित चोरी गरी गायक बिपुल क्षेत्रीले आफनो भन्दै गाएर युटयुवमा समेत राखेको बताए । पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत यस्को सुनुवाई हुन सकेको प्रति समेत उनको गुनासो थियो ।
सामाजिक सञ्जाल बाट टाढा भएका कारण कस्ले के गर्छ आफुलाई केही थाहा नभएको र श्रीमती र साथीहरुले केही समय अघि भनेपनि बिश्वास लागेन । केही दिन अघि टिभीमा हेर्दा थाहा भयो कि मेरो गित त कही कतै मेरो नाम उल्लेख नगरी उनले आफनो भनेर राखेका रहेछन उनले भने ।
बि.स २०३५ सालमै यो मेरो गित रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको हो । रेडियो नेपालको रेकर्डमा हेर्दा हुन्छ । यो मेरो रचना,संगित र स्वरमा रहेको गित हो । ३८ बर्षपछि मलाई नसोधी मेरो अनुमति नलिई यो गित आएर युटयुवमा राखेपछि यो गित चोरी हा्े की होइृन आफै भन्नुस ।
भारतीय मजदुरको करेन्ट लागेर मृत्यु
उदयपुरमा ज्यूउँदोलाई मृतक बनाई जग्गा नामासरी
बेलबारीको बजेट ८० करोड
धरान प्रहरी द्वारा लागूऔषध कारोबारीमा संलग्न गिरोह प्रक्राउ
छथर गाउँपालिकामा जेष्ठ नागरिकलाई घरैमा पुगेर स्वास्थ्य परिक्षण